‘दबंग ३’ मा ट्वीष्ट ! महेश मांजरेकरको छोरीसँग रोमान्स गदै सलमान ,यस्तो छ कहानी - Medianp.com
‘दबंग ३’ मा ट्वीष्ट ! महेश मांजरेकरको छोरीसँग रोमान्स गदै सलमान ,यस्तो छ कहानी
काठमाडौँ । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान ‘भारत’ को सफलतापछि ‘दबंग ३’ को शूटिङमा ब्यस्त छन् । फिल्मको सेटको केही तस्विरहरु समेत बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले भाइजानको यस फिल्मको कहिले आइटम डान्स ,उनको भूमिकालाई लिएर हरेक दिन नयाँ खबर बाहिर आउने गर्छ ।तर अहिले यो फिल्ममा ट्वीस्ट रहेको भन्दै अर्को खबर बाहिर आएको छ ।
बताए अनुसार सलमान यो फिल्ममा नयाँ दुई युवतीसँग रोमान्स गदै छन् । किनभने यो पटक सलमानकी प्रेमिका सोनाक्षी सिंह नभई अरु कुनै हुनेछिन् । एक रिपोर्टको अनुसार सलमानको यो फिल्ममा डायरेक्टर महेश मांजरेकरको छोरीले डेब्यू गदै छिन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेकी महेशकी छोरी सई बलिउडमा सलमानको साथमा प्रवेश गदैछिन् ।
फिल्ममा कस्तो छ सईको रोल ?
यो पटक सलमान खान (चुलबुल पाण्डे)१८ वर्षको युवाको भूमिकामा देखिदैछन् ।यो कहानीमा जब चुलबुल पाण्डेलाई प्रहरीको काम मिल्दैन् ,त्यसबेला सलमान र सई प्रेम सम्बन्धमा हुनेछन् । बताए अनुसार यी दुवैको फिल्ममा गीत समेत हुनेछ । यो दबंगको सिरिजको तेस्रो फिल्म हो । यस फिल्ममा रज्जोको भूमिकामा सोनाक्षी सिंह हुनेछिन् ।फिल्म यो वर्षको २० डिसेम्बरमा रिलिज हुदैछ ।
चलचित्र ‘माछा माछा’को प्रदर्शन मितिसँगै फस्टलुक पनि सार्वजनिक
‘गोलमाल ५’ मा फेरी एकसाथ आउदै अजय देवगन र रोहित शेट्टी ,शुरु हुदैछ फिल्मको तयारी